Scotland iyo Netherlands oo badiyay, Ireland & France oo barbaro galay, Natiijooyinka Kulamada Isreebreebka ee Xalay la Ciyaaray | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Scotland iyo Netherlands oo badiyay, Ireland & France oo barbaro galay, Natiijooyinka...
Scotland iyo Netherlands oo badiyay, Ireland & France oo barbaro galay, Natiijooyinka Kulamada Isreebreebka ee Xalay la Ciyaaray
Xalay waxaa la Ciyaaray Kulamo ka tirsan Isreeb-reebka Koobka Adduunka Qeybta Yurub iyadoo Xulalka isku diyaarinayaan in Talaabo u jirsadaan u soo bixitaanka Koobka Aduunka ee Qatar 2022.
Ireland , ayaa barbaro 1-1 ah la gashay Azerbaijan garoonka Aviva, Kooxda martida loo ahaa ayaa u muuqatay inay guuldaro ku soo gaareyso garoonkooda, laakiin Shane Duffy ayaa badbaadiyey 87 daqiiqo ciyaarta oo socota.
Kulanka kale ee Group A, Serbia ayaa 4-1 kaga badisay Luxembourg , iyagoo hogaanka kula wareegay.
Scotland ayaa ilaashatay rajadooda isreebreebka fiidnimadii Sabtida, markii ay 1-0 kaga badisay Moldova garoonka Hampden Park. Lyndon Dykes ayaa u dhaliyay goolkii ugu muhimsanaa 14 daqiiqo, kooxda martida loo ahaa ayaa soo gashay kaalinta saddexaad ee Group F.
Austria , ayaa la kulantay guuldarro 5-2 ah oo ka soo gaartay Israel, Israa’iil ayaa weli shan dhibcood ka dambeysa hoggaamiyeyaasha Denmark , oo 1-0 kaga badiyay Faroe island.
Dhanka kale, France ayaa dhibtooneysa kadib barbaro labaad oo isku xigta oo la galeen Ukraine barbaro 1-1. iyagoo gadaal ka helay goolka Bar-baraha, Mykola Shaparenko uu furay gooldhalinta qeybtii hore. Anthony Martial goolkaasi ka bar-bareeyay.
Finland ayaa ahayd kooxdii ugu horraysay ee ku guulaysatay Group D, kulan ay la Ciaayeen Kazakhstan ah. Joel Pohjanpalo ayaa ahaa geesiga kooxda martida loo ahaa, isagoo madax ku dhaliyay goolkii kaliya ee ciyaarta oo 1-0 looga adkaaday si uu Finland ugu gacan geliyo guushoodii ugu horreysay ee isreebreebka.
Norway ayaa Erling Haaland u mahad celisay mar kale guushii 2-0 ee ay ka gaareen Latvia , ka dib markii xiddiga Borussia Dortmund uu dhaliyay rigoore 20 daqiiqo. Mohamed Elyounoussi ayaa natiijada ka dhigay mid aan shaki ku jirin bartamihii qeybtii labaad, isagoo u diray Norway kaalinta koowaad ee G.
Turkiga ayaa sidoo kale guul ka gaaray Group G, iyagoo 3-0 ku garaacay Gibraltar waxaana goolasha u kala dhaliyay Halil Dervisoglu, Hakan Calhanoglu iyo Kenan Karaman. Taasi waxay sii adkeysay booskii ugu sareeyay ee group-ka, in kasta oo Netherlands ay hal dhibic ka dambeyso, ka dib markii ay 4-0 kaga badiyeen Montenegro.
Memphis Depay ayaa dhaliyay laba gool, halka Georginio Wijnaldum iyo Cody Gakpo ay ku dareen goolasha.
Group-ka H Ruushka ayaa gaaray guul, isagoo guul 2-0 ah ka gaaray Cyprus . Aleksandr Yerokhin ayaa jabiyey ismari waagii ciyaarta 6 daqiiqo, Rifat Zhemaletdinov ayaa hogaanka u labeeyay 10 daqiiqo kadib nasashada kooxda martida ahayd.
Serbia 4 -1 Luxembourg
Finland 1 -0 Kazakhstan
Faroe Islands 0- 1 Denmark
Israel 5 -2 Austria
Scotland 1 -0 Moldova
Latvia 0- 2 Norway
Gibraltar 0- 3 Turkey
Netherlands 4 -0 Montenegro
Qubrus 0- 2 Ruushka
Slovenia 1 -0 Malta
Slovakia 0- 1 Croatia
Previous articleWareysi: Maleeshiyada ku beesha ah Ikraan Tahliil ee gaysanaya afduubyada oo hanjabaad culus soo saaray
Next articleHirShabelle oo war kasoo saartay weerarkii ka dhacay JOWHAR